Tag: wakaaladda suuq geynta | Martech Zone
Tag: wakaaladda suuq geynta
Maxay Tahay Celceliska E-mayl Qiimeyaasha Furan iyo Heerarka Taabashada
Khamiista, Noofembar 3, 2016 Douglas Karr
IBM Suuqgeynta Cloud ayaa sii daayay Daraasaddooda Daraasadeed ee 'Email Email Metrics Benchmark 2016' Warbixinta waxay ku siineysaa xog kuu oggolaaneysa inaad isbarbar dhigto ololeyaasha emaylkaaga oo dhan 25 furan, guji-dhex marin, liis garaac iyo cabbirada moobiilka. Intaa waxaa sii dheer, warbixintu waxay leedahay: Isbarbar dhigyada ku takhasusay warshadaha iyo jajabyada juqraafiyeed ee ka imanaya guud ahaan isticmaalka aaladda, isbadalada ciidaha, emayllada macaamilka iyo sicirka kaqeyb galka Meelaha calaamadaha dhaafsiisan "celcelis ahaan," oo ay kujiraan dhex dhexaadinta iyo waxqabadka sare Isticmaalka xogtaan iyo dhaqamada ugu fiican ee laxiriira. emaylkaaga
Talaado, Nofeembar 24, 2009 Arbacada, Oktoobar 15, 2014 Douglas Karr
Mid ka mid ah waxyaabaha ugu waa weyn ee ku saabsan suuqgeynta internetka ayaa ah in shaqadaadu ay gebi ahaanba furan tahay adduunku inuu arko. Marka la eego xaqiiqda ay tahay, waxay iga dhigaysaa wax aan la yaabanahay waxa shirkadaha, hay'adaha, iyo xitaa dawladdeena gobolka ay ka fikirayaan markay shaqaaleynayaan caawimaad. Way fududahay in la sii buuxiyo xirfadleyaashaada suuq-geynta internetka: Haddii aad raadineyso shirkad Raadinta Mashiinka Raadinta, jooji raadinta! Shirkadaha ugu wanaagsan ee SEO waa hay'ado kuwaas oo ah